Dowladda Soomaaliya & Hir-Shabeelle oo ka wada hadlay waxka qabashada fatahaadaha | Banaadir Times
HomeWararDowladda Soomaaliya & Hir-Shabeelle oo ka wada hadlay waxka qabashada fatahaadaha
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Xarunta Wasaaradda ee Magaalada Muqdisho waxaa uu kula kulmay qaar kamid ah Golaha Wasiirada Maamulka Hir-Shabeelle.
Kulanka ayaa labada dhinac waxaa ay uga wada hadleen wax ka qabashada dhibaatooyinka fatahaadaha, mideynta hannaanka dakhliga gudaha iyo mudnaanta gaar ka ah ee maalgelinta deegaanada Dowlad goboleedyada.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in wada-hadallada markii ay daacad yihiin ay had iyo jeer horseedi doonaan in guul iyo horumar lagu garo.
Kulanka Maanta dhex-maray Wasiirka Maaliyadda Soomaliya & qaar kamid ah golaha Wasiirada Hir-Shabeelle ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli degaanno ka tirsan gobolada Hir-Shabeelle uu fatahaad ka sameeyay Wabiga Shabeelle.
Previous articleGuddiyada doorashooyinka oo lagu amray inay soo xaroodaan
Next articleDilal ka dhacay Magaalooyinka Muqdisho & Beledweyne